Haweenay Muslimad ah oo si qasab ah dharkii ay ku asturnayd looga saaray – Xeernews24
Haweenay Muslimad ah oo si qasab ah dharkii ay ku asturnayd looga saaray
24. August 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Ciidamada boolis dalka Faransiis ah ayaa si qasab ah dharka ugaga siibay gabadh xidhnayd dhar asturan oo loo yaqaan qamaarka ama Ninqaabka oo goob kamid ah xeebaha dalka Talyaaniga.
Sawiro ayaa la soo dhigay baraha bulshada iyadoo sidoo kale wargeysyada caalamka ay wax ka qoreen booliska Faransiiska ah ee hubeysnaa kuwaasoo ku amray gabadhan in ay iska bixiso dharkii ay xidhnayd.
Maamulada magaalooyin ku yaal koofurta Faransiiska ayaa mamnuucay in dharka qamaarka loo yaqaan ee daboolaya madaxa iyo jidhka aan la xidhan karayn kadib markii weeraro ay ka geysteen dalka Faransiiska ururka IS.
Dhacdadan foosha xun ayaa la sheegay in ay ka dhacday magaalada Nice Salaasadii waxaana sawiradan lagu arkay afar askari oo hubeysan kuwaasoo gabadh ku sugneyd xeebta magaaladaa ku amraya in ay dharka siibto iyadoo magaaladaana ay ahayd magaladii uu nin dhalinyaro ah uu baabuur ku jiidhay dad badan oo u dabaaldagayay maalinta xornimada dalka Faransiiska.
Haweeneyda lagu qasbay in ay dharka xijaabka ah iska bixiso ayaa sidoo kale la ganaaxay. “Waxaan la joogay qoyskeyga xeebta,”ayay tidhi gabadhan oo 34 sano jir ah magaceedana ku sheegtay Siam,“Waxaan xidhnaa dhar caadi ah oo madaxana aan ku daboolay qorshahayguna ma ahayn in aan dabaasho.”ayay tidhi gabadhan.
Qof goobjooge ah oo goobta ku sugnaa ayaa sidoo kale ka hadlay dhacdadan oo yidh;“Arrinta ugu murugada badneyd waxa ay ahayd markii dad goobta ku sugnaa ay ku dhawaaqeen’Ka tag meesha oo gurigaaga ku laabo’ halka qaar kalana ay u sacbinayeen ciidamada Booliska,”ayay tidhi. Waxayna haweeneydaas goobjooga ahayd sii raacisay“Gabadheeda waa ay ooysay.”
Mamnuucida ay magaalooyin ku yaal koofurta Faransiiska mamnuuceen ayaa waxaa racfaan ka qaatay ururada u dooda xuquuqda dadka iyadoo la filayo in maxkamad ay go’aan ka gaarto khamista.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/08/faransiska.jpg 384 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-08-24 18:09:222016-08-24 18:09:30Haweenay Muslimad ah oo si qasab ah dharkii ay ku asturnayd looga saaray
Ciidanka Djibouti oo u Hogaamin Kornayl Xassan Jaamac oo Cagta-Cagta u Saaray... Mohamed Faarax oo Muujiyey Muslinimo iyo Soomaalinimo